Eoropeana fanalam-barotra eran-tany sy boaty boaty. IP55, Ny boaty fitetezana rano dia afaka mivory miaraka amin'ny maoderina mahazatra an'ny eoropeana, izay afaka mandalo fitsapana CE, TUV, NF. Ny antoka dia 5 taona Ny frontplate dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC PC. Tena manify, tsotra sy mendrika izy ireo. Tsy ilaina fanokafana ilay boaty rehefa mamadika ny kodiarana ianao.
Kodiarana sy sokitra tsy mahazatra an'ny anglisy. IP66, Ny kodiarana efa manana CE, ary ny boaty azo avy amin'ny fantsona dia afaka mivory miaraka amina paosin'ny BS, izay afaka mandalo fitsapana BS, GCC, ny antoka dia 5 taona Ny frontplate dia vita amin'ny fitaovana PC fiarovana avo indrindra amin'ny tontolo iainana PC. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny poketra BOX dia vita amin'ny fitaovana PC fiarovana fiarovana tontolo iainana ambony.
American Series G Series
Ara-barotra Linele ara-barotra amin'ny fantsom-pifandraisan-dasambola Lineatcr dia ny fitafiana kanto sy tsara tarehy.Ny fitaovana fandefasana finday dia mora sy haingana hametrahana Ny rindrina p asicika dia vita amin'ny osetreur miaro-miaro amin'ny fiarovana sy ny thermoplasticsaterial.
American Series C Series